Ngosipụta ihe ngosi 3D Ndị nrụpụta - China 3D ngosi nkwụnye Suppliers & Factory
Ọkọlọtọ Tower bụ pyramid atụgharịrị nke nwere akụkụ ngosi 3. Ụdị ogologo na nke pụrụ iche ga-eme ka ị pụta ìhè na ihe ngosi ma ọ bụ ihe omume. Ụdị 3 dị iche iche ma ọ bụ ihe niile ga-ekwe omume dabere na mkpa gị.
Akpọrọ ọkọlọtọ oké ifufe ahụ aha n'ụdị ya, ọkọlọtọ ngosi cylinder 3D. N'adịghị ka ọkọlọtọ Burgundy ma ọ bụ ọkọlọtọ lantern, ọkọlọtọ ifufe bụ ihe eserese na-akwụsịghị akwụsị. Ọ nwere ike ịtụgharị na ikuku. Iji ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí dị ka ihe ngosi, ihe ngosi ahia, nnukwu ụlọ ahịa wdg.
A na-akpọ ọkọlọtọ Toblerone n'aha chocolate ka ha nwere ọdịdị yiri ya. Site na ijikọ ọkọlọtọ atọ kwụ ọtọ, ị nwere ike ịnwe ebe a na-ebi akwụkwọ ka ukwuu. Enwere ike iji ya dị ka ọkọlọtọ kwụ ọtọ. Ị nwere ike iji n'oge dị iche iche ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nke nwere ike ịchekwa ego na oge gị. Ụdị abụọ ahụ dị mfe ịgbanwe eserese.
Ọkọlọtọ pyramid bụ nhọrọ dị mma maka ịtọlite ​​​​ihe ngosi gị ngwa ngwa na mmemme. Na ụdị ọhụrụ nwere ike ime ka ị pụta ìhè. Enwere ike ịtọ ya ngwa ngwa n'ime nkeji. Ị nwere ike ịgbanwe eserese dị mfe ma ọ bụrụ na ozi gị gbanwere.
Ọkọlọtọ gbapụta kwụ ọtọ bụ A-Frame Structure. Ọ dị mfe iji, mpịakọta, chekwaa na ibufe. Ọzọ mmapụta ọkọlọtọ nlereanya dabara gị chọrọ. A na-eji ya eme ihe na gọọlfụ, mmemme okpomọkụ, ubi, mbara ala na ihe omume osimiri na ihe omume ndị ọzọ. N'ịbụ nke emere maka n'èzí, ọ na-eguzogide ọgwụ, nchekwa, ibugharị na adabara maka ngosi ahịa.
Ọkọlọtọ ọkụ, nke a na-akpọkwa Lantern Banners, nke bụ ngwaahịa akara ọhụrụ, nke a na-ebipụta na akụkụ 3, ohere maka izipu ozi karịa ọkọlọtọ ọdịnala, ngagharị na-atụgharị na-emepụta echiche 360 ​​° na ikuku, enwere ike ịhụ ozi gị n'akụkụ ọ bụla.
ọkọlọtọ ọkara ọnwa dị fechaa, obere, enwere ike iji n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí, dị ka ọkọlọtọ Arch mana karịa, nhọrọ dị mma maka ịtọlite ​​​​igosi gị ngwa ngwa na ihe omume. Enwere ike ịtọ ya ngwa ngwa n'ime nkeji. Ị nwere ike ịgbanwe eserese ma ọ bụrụ na ozi gị gbanwere. enwere ike iji ya mee ihe ngosi otu ma ọ bụ akụkụ abụọ.
square vetikal nwere mpịaji bụ otu echiche nwere square kwụ ọtọ, nhọrọ gị ọzọ pụrụiche maka ntọala mmemme gị. Ọ dị mfe mpịakọta, chekwaa na ibufe. A na-eji ya eme ihe n'usoro ọmụmụ dị iche iche, mmemme okpomọkụ, na nkwalite mmemme ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ.